ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့၏ အဓိကလမ်းမကြီး တစ်လမ်းဖြစ်သည့် ကမ်းနားလမ်းကို လူသွားလမ်းပလက်ဖောင်းအပါ (၂၄)ပေ အကျယ် ကွန်ကရစ်လမ်း ဖောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဟိုပန်မြို့နယ်၊ “ဝ” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းရှိ သိန္နီ -ကွမ်းလုံ – ဟိုပန် – မိုင်းမောလမ်းအား အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဆက်သွယ်သွားလာနိုင်ရန်အတွက် ပျက်စီးနေသော တံတားအမှတ်(၁/၈၀) သံတံတားအဟောင်းအား သံကူကွန်ကရစ်တံတားအဖြစ် ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် မြေပြိုကျသောနေရာများအား ကျောက်စီ မြေထိန်းနံရံနှင့် ကျောက်စီရေမြောင်း တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် ခိုကိုးရာမဲ့ တောင်းရမ်းစားသောက်နေသူများအား ပြုစုစောင့်ရှောက်၍ ၎င်းတို့ဘဝများ ပြန်လည်ရှင်သန်လာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးမည့် စီမံကိန်းတစ်ရပ် ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးဥပဒေပုဒ်မ ၄ အရ “မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ” ကို မည်သည့်အချိန်တွင် ဖွဲ့စည်းမည်၊ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာနည်းဥပဒေကို မည်သည့်အချိန်တွင် ရေးဆွဲပြီးစီးပြဋ္ဌာန်းနိုင်မည်ကို သိရှိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
သရေခေတ္တရာပျူမြို့ဟောင်းအား UNESCO အဖွဲ့ကြီး၏ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ကောင်းစွာထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုအဆင့် MASTER PLAN ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
၃၁ ရက်မြောက်နေ့အစီအစဉ် ( ၁၅ . ၉ . ၂၀၁၆)
(၃၁) ရက်မြောက်နေ့မှတ်တမ်း (၁၅.၉.၂၀၁၆)
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မာန်အောင်မြို့နယ်၊ ရဲကျွန်း-မြောက်ရွာ ဆိပ်ခံတံတားကို စက်လှေများ ဆိုက်ကပ်နိုင်ရေးအတွက် တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်၊ ထောင်ခမက်ကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်းရှိ ဒေသခံပြည်သူများ၏ ဥယျာဉ်ခြံမြေများကို သိမ်းဆည်းပြီး တောင်ဒဂုံဆီအုန်းကုမ္ပဏီမှ စားအုန်းဆီပင်များ စိုက်ပျိုးထားသောမြေနေရာ များအား ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ၊ ဘုတ်ပြင်းလေဆိပ် ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းအတွက် သိမ်းဆည်းခံရသော ဥယျာဉ်ခြံမြေများကို လျော်ကြေးပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် လေဆိပ်စီမံကိန်းမှ မသုံးဘဲ ကျန်ရှိနေသော ဥယျာဉ်ခြံမြေများအား ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မောင်ငံရပ်ကွက်၊ အုပ်စုအမှတ်(၉)၊ အကွက်နံပါတ်(၇၀)၊ အက္ခရာနံပါတ်(၈၆)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၆၅)၊ ဧရိယာ (၄.၅၉၁)ဧကရှိ မြေကွက်များအား ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့မှ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် သိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက် ယခုလက်ရှိတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့သဖြင့် မူလသိမ်းဆည်းခဲ့သည့် ပိုင်ရှင်များ၏ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကို ကုစားပေးရန် သို့မဟုတ် အစားထိုးဖြေလျှော့မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း